Jarmalka oo dacwad ku soo oogay dambiile xabsi daain ku xukuman - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
John Ausonius, oo lagu soo oogay dacwad isaga oo ku xukuman xabsi daa'in. sawir: Yvonne Åsell/TT
Jarmalka oo dacwad ku soo oogay dambiile xabsi daain ku xukuman
La daabacay tisdag 9 maj 2017 kl 12.53
Xeer-ilaaliye ka howl-gala dalka Jarmalka ayaa dacwad ku soo oogay dambiile ah muwaadin iswiidhish oo dalkan kaga xukuman xabsi daa’in oo lagu magacaabo John Ausonius.
Eedeeysanaha ayaa lagu soo oogay dacwad ka dhan ah oo la xiriirta inuu sannadkii 1992 ku dalay magaalada Frankfurt haweenay jarmal.
Haweenaydan ayaa la toogtay muddo iminka ay ka soo wareegtay 25 sannadood, iyadoona uu muddo toddobaad horteed intii aan haweenaydan la dilin uu Ausonius ey xurgufi dhex martay haweenayda isagoona ku eedeeyay inay aalad ka xaday.
Dacwadda lagu soo oogey eedeeysanaha ayaa loo hayaa caddeeymo la xiriira teknikada iyo markhaatiyo sannadkii 1992, sida uu xeer-ilaaliyuhu sheegay.
- Xeer-ilaaliyaha ayaa aamin-san iney jiraan cadeeymmo ku filan ee la xiriira cid goob joog u ahayd iyo haraagii bastoolada laga heley goobtii uu fal-dembiyeedku ka dhacay oo u dhigma kuwii laga heley dalka Sweden, sida ay sheegtay Nadja Niesen oo ka howl-gasha xeer-ilaalinta magaalada Frankfurt am Main.
Cadeeymmo hor lihi ma soo shaac baxeen?
- May. Waa kuwii hore un iyo markhaatiyadii goobta ku sugnaa.
Ausonius ayaa gacanta loo geliyay dalka Jarmalka kolkii uu ogolaaday bishii jannaayo kolkii uu ogolaaday. Isagoona shuruud uga dhigay maxkamadduna ka ogolaatay in haddii uu xukun cusub ku dhaco uu ku qaadan doono dalka Sweden.
Eedeeysanaha ayaa dacawddan lagu soo oogey iska dheereeyay, hase yeeshee qirtay inuu ku sugnaa magaalada Frankfurt am Main xilliga uu fal-dembiyaadka dilka ahi dhacay, isagoona wixii ka dambeeyay bishii jannaayo oo gacanta loo geliyay dalka Jarmalka ku sugnaa ruuman ku yaala dalkaasi.
Illaa iyo hadda ma cadda goorta dacwaddaasi la isugu iman doono, sida ay sheegtay Nadja Niesen.
- Rajadu waxay tahay in la bilaabo kuleeylaha, laakiin waa amuur aan la hubin, sida ay sheegtay mar ay u warrameeysay hayadda wararka Sweden TT.
John Ausonius, wuxuu dhashay sannadkii 1953, wuxuu qaatay magaca lasermannen kadib kolkii uu sannadihii u dhexeeyey 1991-1992 hal ruux qudha ka jaray toban ruuxna uu dhaawax u geeystay. Isagoona u isticmaalay qori leh shiishka layrka. Dhammaan dadyoowga uu wax yeeleeyay ayaa ka soo jeeday dalka dibaddiisa oo isugu jiray qowmiyado kala duwan.
Sannadkii 1995 ayaa lagu xukumay xabsi daa’in iyadoo lagu eedeeyay dil hal ruux ah, isku day dil oo 10 ruux ah iyo sagaal dhac oo uu u geeystay bangiyo.